Abamatekisi bafuna ukuvula irenke yabo | News24
Abamatekisi bafuna ukuvula irenke yabo
PHOTO: precious gumede Izimoto zeSizanani zimi kuRyder Street, abashayeli namaphoyisa bezama ukuxoxisana ngodaba lokulayisha.
ABASHAYELI nabanikazi bezimoto ezithutha umphakathi ama-meter taxi bahlanganele kuRyder Street ngoLwesibili ekuseni ukuzovula isitende sabo okulayisha.
Lenhlangano yosomatekisi isiyilwe kakhulu lendaba yalesi sitende njengoba kusukela eminyakeni edlule besisetshenziswa iSheppy Cabs enye inhlangano yosomatekisi engagunyaziwe.
Umasipala iHibiscus Coast nawo wangenelela kuloludaba wagcina unike iSizanani amaphepha ayigunyazayo ukuthi ilayishe ku-Ryder Street nangaphakathi edolobheni njengoba kuyiyona kuphela inhlangano yezithuthi ezincane esemthetweni.
Okhulumele isizanani uMnu. Snothi Nyathi uthe kade balulinda lolusuku lokuthi bazongena kulesi sitende.
“Sanikwa imvume yokuthi silayishe ku-Ryder Street evela kumasipala mhla zi-14 kuFebuary kulonyaka emva kokuthi siyilwele isikhathi eside,” kusho uNyathi. Uma ebuzwa ukuthi iSheppy Cabs yona kuzokwenzekalani ngayo uthe akazi ngoba vele eziningi izimoto zabo kwaSheppy Cabs azinazo izimvume zokulayisha futhi azithelile.
Bezingabonakali izimoto zeSheppy Cabs ngalolusuku, umgwaqo ubugcwele abomthetho iSAPS neLaw enforcement bezoqapha isimo.
UNyathi uthe umasipala uthi wayikhipa imvume kepha awukaziqedi izinxoxo zokuthi ngempela kuzokwenzakalani.
Uthe bona sebekhathele ukulinda. NangoLwesithathu bazobuya lapha kuRyder Street bayolayisha.
“Umasipala ususitshela ukuthi bazokhipa isinqumo sokugcina mhla zingu 26 kuyona lenyanga. Thina sesifuna ukuqala ukusebenza njengamanje,” kusho uNyathi.
Okhulumela amaphoyisa uColonel Zandra Wiid uthe abashayeli bama-meter taxi abanikwanga imvume yokuqala umsebenzi kuRyder treet.
“Lokhu okushiwo abaSizanani akulona iqiniso, uMax Mbili oyimenenja kamasipala waseHibiscus ukuphikisile ukuthi bayikhipha imvume. Kusazoba nomhlangano,” kusho uWiid.